Nankafy ny heloka-Free Trip: hotely Accommodation | Save A Train
Home > Travel Europe > Nankafy ny heloka-Free Trip: hotely Accommodation
ny Karina Santos
Hostels efa nanana ny rap ratsy noho ny maloto, pahina, ary maimbo be. Fa fantatrao ve fa nohatsaraina ny trano fandraisam-bahiny ankehitriny? Ho an'ireo izay tsy mahafantatra izay tranom-bahiny dia, tsy nandiso tsipelina diso fotsiny ny hotely izahay ary niara-nihazakazaka taminy. Hostels ireo trano mora vidy izay hanampy anao haninjitra ny Travel teti-bola.
Na dia Solo dia lavitra na dia mandeha amin'ny fianakavianao na ny manan-danja hafa, tranom-bahiny manana karazana Accommodation fotsiny ho anao. Hostels matetika no nizara efi-trano. Ny efitrano nizara afaka 8 ny 10 ny olona rehetra miara-bunking. Misy manana efitra, izay mety ho 3 na 4 olona mizara ny efitrano. Raha tianao ny manokana toerana, toerana maro manolotra efitrano tsy miankina na ny fianakaviana efitra, raha toa ianao ka niara-family.
Hostels Mety tsy manana ny frills izay trano fandraisam-bahiny tolotra. Noho izany dia mety ho tsy kafe milina ao an-trano, tsy misy savony maimaimpoana, na ny vata fampangatsiahana anao. Dia tsy akory izay mahazo maimaim-poana towels. Fa ny sasany raha ny marina tranom-bahiny mivarotra savony sy ny zavatra hafa ilaina amin'ny vidiny mora. ary azo antoka, ianao dia tsy mety manana ny Dresser na ny efi-tranonao in nizara efi-trano, nefa tsy mety mankatò manana fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana izay afaka mitahiry ny zavatra. Mety mila mitondra ihany anefa padlock. Raha ny kitapo lehibe loatra ary rehefa checkout, mbola te hanao ny sasany minitra farany hizaha, afaka hamela ny kitapo amin'ny fivarotana ny entana.
Ankoatry ny fananana toerana madio matory sy a fiarovana hidin-trano fitehirizana ny entanao, ny sasany amin'ireo manolotra toerana hafa misy ao ihany koa. Toerana sasany dia hanana zavatra toy ny dobo fidirana, maimaim-poana sakafo maraina, maimaim-poana kafe, fiaraha-monina asa. Misy aza manana saunas sy ny ranonorana sy ny fanorana Toeram-pisakafoana an-trano.
Okay, azo antoka, ianao dia mety tsy hahazo ny fiainana manokana ihany ianao rehefa any amin'ny trano fandraisam-bahiny. Misy faritra kaominina toy ny efitra fandroana, lakozia, faritra fandraisam-bahiny, sy ny asa stations. Na izany aza, izao no fomba tsara mihaona ny olona. Raha mihantona eo amin'ny faritra kaominaly afaka mihaona mpandeha avy manerana izao tontolo izao. Ary na dia manan-danja namana manomboka amin'ny olona mihaona aminao amin'ny diany ary ho avy vaovao Travel buddies, koa! Ny olona izay miasa ao amin'ny tranom-bahiny matetika mahafinaritra sy hampahasosotra ny olona, noho izany dia tsara ny mahazo mifampikasokasoka sy mifanerasera aminy, ihany koa.
Aiza no Hahitana Azy Ireo
Ao ny trano fandraisam-bahiny sasany ivon-tanàna na in toerana ianareo raha tsy izany dia tsy hahita. Freehand Miami, ny hotely in Florida, dia roa ihany no sakana niala tamin'ny tora-pasika, ary manolotra maimaim-poana ho iced kafe ny vahiny. Ary nisy Soisa nanomboka Spa hotely iray antsoina hoe Hostelling International fikambanana tsy mitady tombontsoa manana trano fisakafoanana an-trano izay overlooks Nanketo Alpes eto Soisa.
Matetika izy ireo fa tena Cost
Raha toa ianao ka teti-bola dia lavitra, fa tena azo inoana fa ho betsaka ho liana amin'ny nitoetra tao amin'ny hotely. Ny vidiny dia mety hanomboka ambany hatrany amin'ny cents vitsivitsy ka hatramin'ny $100 for nizara efi-trano, arakaraka izay anisan'izao tontolo izao ianareo ao, saingy ny tena fahita firy ny vidin-javatra mba handeha ambony kokoa noho izany. Na dia ny hotely izay overlooks ny Nanketo Alpes eto mandeha manodidina $64 isaky ny alina.
Ny vaovao farany dia te-hanome anareo ny, Ny fomba tsara indrindra hahazoana ny hotely dia lamasinina mandeha miaraka amin'ny Save A Train ary ny antony izany dia ny hoe foana ny fiaran-dalamby tonga any am-pon'ny ny tanàna sy izay misy ny trano dia hotely, mankafy ny Travel sy ny fiaran-dalamby Tsidika.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fenjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ao amin'ny / andehilahy na / de sy ny maro hafa fiteny.
#akanin'ny tanora #tranom-bahiny traveltips
Karina Santos - dia renin-janakalahy 2 taona, ary vady. Feno diapers sy mailaka ny androny. Izany no antony, nahita ambaratongam-pandaminana maro samihafa izy. Ny asany dia matetika manodidina ny asa, sy ny fianakaviana. Tiany ny mandany ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny zanany ary mandeha miaraka amin'ny vadiny amin'ny alina. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Aiza no Misy ny Best tanàna koa ho an'ny Foodies In Eoropa
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Spain, Travel Europe